Topic · Burma · Change.org
Petition to Daw Khin Kyi Foundation, Sedona Hotel Yangon
On October 5, 2018, the Sedona Hotel in Yangon will hostagala fundraiser for the Daw Khin Kyi Foundation, founded by Aung San Suu Kyi, to benefit "underprivileged communities in Myanmar". The Rohingya, who are from Myanmar and who have mostly been forced from the country by military violence, are the population that would benefit most from the recognition and the support of the Daw Khin Kyi Foundation. State Counsellor Aung San Suu Kyi has defended military violence against the Rohingya for years, and last month, the UN said she had "contributed to the commission of atrocity crimes". Her supporters around the world want to see the once-respected democracy activist stand up for Myanmar's most abused population. Supporting them through the foundation named after her mother would be an easy yet meaningful gesture. The invitation to the upcoming gala says the funds it raises will go to "worthy causes". If the foundation is looking foramore specific cause, the cause of the stateless Rohingya, who have enduredagenocide, is an obvious choice.
Petition to State Counsellor, Republic of the Union of Myanmar, President, Republic of the Union of Myanmar, Attorney-General of the Union, Republic of the Union of Myanmar, Union Minister for Religious Affairs and Culture, Republic of the Union of Myanmar, Chief Minister, Mandalay Region, Vice-Chairman, State Sangha Maha Nayaka Committee, Attorney-General (Mandalay Region), Director-General, Department of Religious Affairs and Culture, Chairman, Mandalay Region Sangha Nayaka Committee, Chairman, Township Sangha Nayaka Committee, Maha Aungmye Township
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံ ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ(၀ီရသူ) အား အရေးယူရန် တိုင်ကြားစာ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ် နဲ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ထံသို့ ပေးပို့မည့် ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ (၀ီရသူ - မစိုးရိမ်) ကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူဖို့ တိုင်ကြားတဲ့စာနဲ့ တိုင် ကြားမှုကိုထောက်ခံကြောင်း လက်မှတ်ကောက်ယူတဲ့ petition ပါ။ ၀ီရသူ ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်းက ရေးသားခဲ့တဲ့ ဦးကိုနီနဲ့ ကိုနေ၀င်းကို လုပ်ကြံသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရေးသားချက်များ၊ တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မောင်းထုတ်ချင်သူတွေ သတိထားကြ၊ ခြေဥဖျက်သိမ်းလိုသူတွေ သတိထားကြ၊ ကြည်လင်းတွေထွက်လားမှ မဘသကို အဆိုးမဆိုနဲ့ စတဲ့ ရေးသားချက်များဟာ ခြိမ်းခြောက်မှုနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုမြောက်ပါတယ်။ ဒါကို အများက မသိကြသေးပါဘူး။ အစိုးရဘက်ကလည်း ဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒီလိုဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းမရှိသေးတာကြောင့် ရှေ့နေများ၊ ပညာရှင်များ နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှသူများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ တိုင်ကြားစာကို ပြင်ဆင်၍ ထောက်ခံ လက်မှတ်ကောက်ယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်ကြားစာကိုဖတ်ရှု ၊ သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အများသိအောင် ဖြန့်ဝေပေးပါ။ နေပြည်တော်၊ မန္တလေးနဲ့ ရန်ကုန်ရှိ အစိုးရရုံးများသို့ မပေးပို့ခင် အနည်းဆုံး လက်မှတ် ၁၀၀၀၀ ကောက်ယူရရှိရန် ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ (လက်မှတ်ရေးထိုးပုံကို အောက်ဆုံးတွင် ရှုပါ။) Executive Summary This isacomplaint letter and petition calling for legal action against U Vicitta Bhivimsa (Wira Thu - Ma Soe Yein) addressed to State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, Attorney-General of the Union and Chief Minister of Mandalay Region. In February, Wira Thu published statements on Facebook which expressed gratitude to Kyi Lin and company who assassinated and murdered U Ko Ni (prominent lawyer who was spearheading the work of amending/dissolving the Constitution) as well as warned citizens who wish to "chase off" military MPs [from the parliament] or dissolve the Constitution that "Kyi Lins would creep out from around the corner" if they do so. These writings fit the criteria of criminal intimidation and terrorism according to Section 503 of Myanmar Penal Code and Counter-terrorism Law. As many are unaware of this and the government has yet to take legal action against Wira Thu, we have preparedacomplaint letter in consultation with advocates, members of civil society and the academia, and have startedapetition to collect signatures endorsing the letter. Please read the letter, sign the petition and spread it far and wide if you agree. We expect to gather at least 10,000 signatures before we send the letter to government offices in Nay Pyi Daw, Mandalay and Yangon. (Please scroll down for English version of the letter) သို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ရက်စွဲ။ ။ ၂၈ ၊၃၊၂၀၁၆ အကြောင်းအရာ ။ ။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ဥပဒေရေးရာ အကြံပေး ဦးကိုနီ အား လုပ်ကြံမှု နှုင့် အငှားယာဉ်မောင်း ကိုနေ၀င်းအား သတ်မှု ကျူးလွန်သူ ကြည်လင်း နှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရန် အားပေးကူညီသူ ကြံရာပါများအား ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ (၀ီရသူ) မှ ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ချီးကျူးပြောဆိုခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုအား အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်း နှင့် ပြည်သူများမှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်/ဖျက်သိမ်းခြင်း မပြုနိုင်ရန် အကြမ်းဖက်မှု ဆန်ဆန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းတို့အား တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူပေးပါရန် အသိပေးတိုင်ကြားခြင်း။ ၁။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဟာအောင်မြေမြို့နယ် စိန်ပန်းရပ်ကွက် မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဓမ္မသဟာရ ကျောင်းနေ ၀င်းခိုင်ဦး (ခ) ၀ီရသူ (မစိုးရိမ်) (ခ) ဘဒ္ဒန္တ ၀ိစိတ္တာဘိဝံသသည် “ ချောင်ကြိုချောင်ကြားက ကြည်လင်းများ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်- “ကြည်လင်းကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ အောင်ဝင်းဇော်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ အောင်ဝင်းခိုင်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဇေယျာဖြိုးကို ကျေးဇူးတင်တယ်။… …တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မောင်းထုတ်ချင်သူတွေ သတိထားကြ။ ခြေဥဖျက်ချင်သူတွေ သတိထားကြ။ ကြည်လင်းတွေ ချောင်ကြိုချေုာင်ကြားက ထွက်လာမှ မဘသကို လွှဲမချနဲ့။” စသည်ဖြင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ဖျက်သိမ်းရန် နှင့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀၉၊ ပုဒ်မ ၁၄၁၊ ပုဒ်မ ၁၆၁ နှင့် ပုဒ်မ ၄၃၆ တို့အားပြင်ဆင်ရန် ဆန္ဒရှိသော ပြည်သူများအား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အဆိုပါ အခြေခံဥပဒေပါပုဒ်မများကို ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျစွာ ပြင်ဆင်ခြင်း/ဖျက်သိမ်းခြင်း မပြုနိုင်စေရန် အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်သည့် သဘောဆောင်သော စာသားများကို ၂၆၊၂၊၂၀၁၇ ရက်စွဲဖြင့် ရေးသားခဲ့ပြီး ၂၆၊၂၊၂၀၁၇ ရက် ညနေ ၁၀ နာရီ ၃၉ မိနစ် အချိန်တွင် အင်တာနက်စာမျက်နှာလိပ်စာ "https://www.facebook.com/bithuka.gyi" ရှိ Wira Thu အကောင့်ကို သုံးစွဲ၍ facebook လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ်သို့ လွှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ ၂။ ၎င်းအပြင် ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တာဘိဝံသ မှ “ဘုရားလောင်းထုံး နှလုံးမူလေသလား…”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် - “တပည့် လိမ္မာ ဆရာအာပတ်လွတ် ဟူဘိသို့ ဆရာတော် သံဃာတော်များ လက်လှမ်း မမှီသော ဘာသာရပ် တခုကို လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်သောအားဖြင့် အနာဂတ်မှာ ကျရောက်လတံ့သော အန္တရာယ်ကြီးအတွင်းမှ အမိမြန်မာပြည်ကြီးကို စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံ ကယ်တင်လိုက်နိုင်သော အဆက်အသွယ်လုံးဝမရှိခဲ့သော မိတ်ဆွေကြီး လေးဦးအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။” စသည်ဖြင့် အကြမ်းဖက်လုပ်ကြံမှုကို အားပေးသည်သာမက စာရေးသူကိုယ်တိုင် အားထုတ်ရန် စိတ်ဆန္ဒရှိကြောင်းကို သွယ်ဝိုက်၍ ထင်ဟပ်စေသည့် စာသားများကို ၆၊၃၊၂၀၁၇ နေ့စွဲဖြင့် ရေးသား၍ ၆၊၃၊၂၀၁၇ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၁၂ မိနစ် အချိန်တွင် ကြည်လင်း၊ အောင်ဝင်းဇော်၊ အောင်ဝင်းခိုင်၊ ဇေယျာဖြိုး တို့၏ ဓာတ်ပုံများနှင့်တကွ Wira Thu အကောင့်ကို သုံးစွဲ၍ Facebook လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ်သို့ လွှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ ၃။ မြန်မာနိုင်ငံရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ အခန်း (၂၂) ပုဒ်မ ၅၀၃ တွင် - “မည်သူမဆို၊ တခြားသူ တဦးတယောက်၏ ကိုယ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဂုဏ်သရေကို သော်လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းကို သော်လည်းကောင်း၊ နစ်နာစေမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ရာတွင်၊ ထိုသို့ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းသည် ထုိုသူအား ထိတ်လန့်ခြင်း ဖြစ်စေရန် အကြံဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်လျှင်၊ သို့တည်းမဟုတ် ခြိမ်းခြောက်သည့်အတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်းခံရမည်ကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် အကြောင်းအဖြစ်ဖြင့် ဥပဒေအရ ပြုလုပ်ရန် တာဝန်မရှိသော ပြုလုပ်မှုကို ထိုသူအား ပြုလုပ်စေရန် အကြံဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေအရ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြုလုပ်မှုကို ထိုသူအား မပြုမလုပ်ပျက်ကွက်စေရန် အကြံဖြင့် သော်လည်းကောင်း ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြစ်လျှင်၊ ထုိုသူသည် ရာဇ၀တ်မကင်းသော ခြောက်လှန့်မှုကို ကျုးလွန်သည်မည်၏” ဟုဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ၄။ ၎င်းအပြင် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ အခန်း (၁) ၊ ပုဒ်မ ၃ (ခ) တွင်- “အကြမ်းဖက်မှု ဆိုသည်မှာ အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်မှုနှင့် ပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်မှုများကို ဆိုသည်- … (၁၃) အများပြည်သူအတွင်း ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အစိုးရ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုအား ဥပဒေနှင့်မညီသည့် လုပ်ရပ်တစ်ခုကို အတင်းအကြပ်ပြုလုပ်စေခြင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်အညီ ပြုလုပ်ရမည်ကို မပြုလုပ်ဘဲ ရှောင်ရှားစေခြင်းတို့ကို ရည်ရွယ်၍ အရပ်သားကိုဖြစ်စေ၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတိုက်ပွဲဖြစ်နေသည့် အခြေအနေတွင် စစ်ပြိုင်မှု၌ ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခြင်း မရှိသည့် အခြားသူတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ သေစေရန် သို့မဟုတ် အပြင်းအထန် နာကျင်စေရန် နှင့် အခြားပြုလုပ်မှုများ၊… …(၁၅) အကြမ်းဖက်အုပ်စု တစ်ခုခုတွင်ဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖြစ်စေ သူတစ်ဦးဦးအား ပါဝင်စေရန် တိုက်တွန်းမှု၊ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမှု၊ ၀ါဒဖြန့်မှု၊ စုဆောင်းရန် ပြုလုပ်မှုများ…” ဟုလည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ အခန်း (၁) ပုဒ်မ ၂ တွင်- “ဤဥပဒေအရ အောက်ဖော်ပြပါ အကြမ်းဖက်မှုကို ကျူးလွန်သူ၊ ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်သူ၊ အားပေးကူညီသူ၊ လှုံ့ဆော်သူ သို့မဟုတ် ကြံရာပါအဖြစ် ဆောင်ရွက်သူများအပေါ် စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိစေရမည်- (က) မည်သူမဆို နိုင်ငံတော် အတွင်း ကျုးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှု…” ဟုလည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ အခန်း (၁) ပုဒ်မ ၃ (ဗ) တွင်- “လှုံ့ဆော်မှု ဆိုသည်မှာ အကြမ်းဖက်မှု တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရေးအတွက် လှုံ့ဆော်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သတင်းစကား သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ကို သိသိသာသာ ဖြစ်စေ၊ မသိမသာဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အားပေး အားမြှောက်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတနည်းနည်းဖြင့် ကြားမြင်သိရှိစေခြင်းကို ဆိုသည်။” ဟုလည်းကောင်း ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ၅ ။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတို့ စုပေါင်း နေထိုင်ကြသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး "မိမိချစ်ခင်မြတ်နိုးသည့် စကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာသာသနာနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်" ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းရန် လည်းကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၁၀၉၊ ပုဒ်မ ၁၄၁၊ ပုဒ်မ ၁၆၁ နှင့် ပုဒ်မ ၄၃၆ တို့ကို ပြင်ဆင်ရန်လည်းကောင်း ဆန္ဒရှိသော ပြည်သူများအား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အဆိုပါ ခြေခံဥပဒေပါပုဒ်မများကို ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျစွာ ပြင်ဆင်ြခင်း/ဖျက်သိမ်းခြင်း ပြုရန်အလို့ငှာ အားမထုတ်နိုင်ကြစေရန် အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်သည့် သဘောဆောင်သော စာသားများကို လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုကို အားပေးအားမြှောက် ပြုသည့်စာသားများကို လည်းကောင်း ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရေးသားချက်များ သည် ပြည်သူများ၏ စိတ်နှလုံးတွင် ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်သာမက နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်ရေး နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကိုထိခိုက်စေသည့်အပြင် ပြည်သူများအား ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ြ်ခင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း စသော နိုင်ငံသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခြင်း မပြုနိုင်ရန် အဟန့်အတား ဖြစ်စေပါသည်။ သို့ပါ၍ ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ၏ ရေးသားမှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၃ အရ ခြိမ်းခြောက်မှု နှင့် အကြမ်ဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ အရ အကြမ်းဖက်မှု မြောက်သည်သာမက ငြိ်မ်းချမ်းစွာအတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီး လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နေပါသည်။ ၆။ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အခန်း (၁) ပုဒ်မ ၂၂ (ခ) တွင် “ နိုင်ငံတော်သည် တိုင်းရင်းသားများ အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ချစ်ကြည်လေးစားရေးနှင့် ရိုင်းပင်းကူညီရေးတို့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်မည်” ဟုလည်းကောင်း၊ အခန်း (၅) ပုဒ်မ ၂၁၉ တွင် “ ပြည်ထောင်စု အစိုးရသည် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည်” ဟုလည်းကောင်း ပါရှိပါသည်။ ၇။ ၎င်းအပြင် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ အခန်း(၈) ပုဒ်မ ၃၄၇ တွင် “ နိုင်ငံတော်သည် မည်သူ့ကိုမဆုို ဥပဒေအရာတွင် တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရရှိစေရမည်။ ထို့ပြင် ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ကိုလည်း တန်းတူညီမျှစွာ ရယူပိုင်ခွင့်ပေးရမည်” ဟုလည်းကောင်း၊ အခန်း (၈) ပုဒ်မ ၃၅၃ တွင် နိုင်ငံတော်သည် “မည်သူ့ကိုမျှ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီမှတစ်ပါး၊ အသက်ကိုဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုကိုဖြစ်စေ နစ်နာဆုံးရှူံးမှုမရှိစေရ” ဟုလည်းကောင်း ပါရှိပါသည်။ ၈။ ဤသည်သာမက ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုကို နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေ အခန်း (၁) ပုဒ်မ ၂ (ဂ) တွင် " နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ သွားလာဆောင်ရွက်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်နိုင်ခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်" ဟု အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုထားပြီး အခန်း (၂) ပုဒ်မ ၃ တွင် - " နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှု အပြည့်အ၀ ရရှိခံစားခွင့်ရှိသည်" ဟုလည်းကောင်း၊ အခန်း (၃) ပုဒ်မ ၅ (က) တွင် - "သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီမှတစ်ပါး ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုကိုဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုကိုဖြစ်စေ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရန် မည်သူ့ကိုမဆို ကာကွယ်ပေးရမည်" ဟုလည်းကောင်း၊ အခန်း (၃) ပုဒ်မ ၆ တွင် - "သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ဤဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုင်ကြားချက်ကို လက်ခံရရှိပါက ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်" ဟုလည်းကောင်း ပါရှိပါသည်။ ၉ ။ ၎င်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆၆ တွင်- " ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ဖြစ်သူသည် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ဥပဒေ ညွှန်ကြားချက်ကို ဖီဆန်ခြင်းဖြင့်၊ တဦးတယောက်သောသူအား နစ်နာစေရန် အကြံနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ နစ်နာစေတန်ရာသည်ကို သိလျက်နှင့်သော်လည်းကောင်း ထိုဥပဒေ ညွှန်ကြားချက်ကိုသိလျက်နှင့် ဖီဆန်လျှင်" ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာ ရောက်သည်ဟု ပါရှိပါသည်။ ၁၀။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေ အခန်း (၃) ပုဒ်မ ၁၂ (က) နှင့် ပုဒ်မ ၁၂ (စ) တို့တွင် “ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း” နှင့် " ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများကို တရားဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်း" တို့ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၏ တာဝန်များအဖြစ် အသီးသီး ဖော်ပြထားပြီး၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေ အခန်း (၄) ပုဒ်မ ၂၆ (က) နှင့် ပုဒ်မ ၂၆ (င) တို့တွင် “သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်၏ တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခြင်း” နှင့် " ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများကို တရားဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်း" တိုိ့ကို တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်တို့၏ တာဝန်များအဖြစ် အသီးသီး ဖော်ပြထားပါသည်။ ၁၁။ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ အခန်း (၅) ပုဒ်မ ၂၅၀ တွင် "တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရာတွင် ကူညီရန်တာဝန်ရှိသည်" ဟုပါရှိပါသည်။ ၁၂။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဥပဒေ အခန်း (၄) ပုဒ်မ ၅ (ဂ) တွင် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် “ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေး၊… …ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး” စသော နိုင်ငံတော်၏ “ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်စေရန်အတွက် အစိုးရအဖွဲ့၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်" ဟုပါရှိပါသည်။ ၁၃။ သို့ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၃ အရ ခြိမ်းခြောက်မှု နှင့် အကြမ်ဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ အရ အကြမ်းဖက်မှု မြောက်သည်သာမက နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒများဖြစ်ကြသော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေး၊ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး တို့ကိုပါ ထိပါးစေနိုင်သော ရေးသားမှုများကို ရေးသားသူ ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ အား ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်၍ ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါရန် အသိပေးတိုင်ကြားအပ်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် ပြည်သူတို့၏ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လိုလားသူများကိုယ်စား မိတ္တူ ကို - ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ် သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌဆရာတော် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ် သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သာသနာရေးမှူး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သံဃနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဌဆရာတော် မဟာအောင်မြေမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးသံဃနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဌဆရာတော် To State Counsellor State Counsellor’s Office Republic of the Union of Myanmar Date: 28.3.2016 Title: Report to take legal action on U Vicitta Bhivamsa for abetting terrorist acts and threatening the citizens in an act of terrorism to deter them from dissolving or amending the Constitution 1. Win Khine Oo, also known as Wira Thu (Ma Soe Yein), also known as Baddanda Vicitta Bhivimsa, who is residing at Dhamma Tha Har Ya Monastery, New Ma Soe Yein Monastery Compound, Sein Pann Ward, Maha Aungmye Township, Mandalay Region, wrote the following text dated February 26, 2017 and titled “Kyi Lins from Around the Corner”, and published on Facebook at 10:39 pm in the evening of February 26, 2017 at the web address of “https://www.facebook.com/bithuka.gyi using the username “Wira Thu” to the effect of threatening and creating terror among the citizens who wish to amend or dissolve the Constitution in order to deter them from amending Articles 109, 141, 161 and 436 of the Constitution or dissolving the Constitution: “I am thankful to Kyi Lin. I am thankful to Aung Win Zaw. I am thankful to Aung Win Khaing. I am thankful to Zay Yar Phyo. …Those who wish to chase off the military MPs [from the parliamentary seats], be mindful; those who wish to dissolve the Constitution, be mindful; Do not put the blame on Ma Ba Tha only when Kyi Lins creep out from around the corner.” 2. In addition, Baddanda Vicitta Bhivimsa wrote the following, dated 6th March, 2017 and titled “In the Way of the Boddhisava?”, which reflect not only the intent to encourage acts of terrorism but also to attempt acts of terrorism , and published using the username “Wira Thu” on Facebook at 1:12 pm in the afternoon of 6th March, 2017: “I specially thank the four esteemed friends who I had no contact with before for their selfless act of saving Myanmar from impending threat by dealing with the matter by practical means beyond the reach of the sangha as in the saying thataclever disciple saves the master from violating his vows.” 3. It is stated in Chapter XXII, Section 503 of Myanmar Penal Code that, “Whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of any one in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do, as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation.” 4. Terrorism is defined in Chapter I, Article3(b) of Counter-terrorism Law as: “…doing or failure from doing one of the acts below with the intent to commit terrorism: …(13) Creating fear among the public; forcing the government, an international oralocal organization to commit an illegal deed or to deter them from fulfillingalawful obligation by causing death or serious injury toacivilian oranon-combatant or by means of other acts. …(15) Persuading or coaxing into taking part, spreading propaganda, recruiting members whether withinaterrorist group or while carrying out acts of terrorism…” It is stated in Chapter I, Article2of Counter-terrorism Law that, “Those who commit terrorist acts, attempt to commit terrorist acts, abet in committing of terrorist acts, incite terrorist acts, act as accomplice in committing of terrorist acts as described below shall be sentenced according to this law: (a) Terrorism committed by any person in the country…” 5. Chapter I, Article 22 (b) of the Constitution states that, "the Union shall assist to promote solidarity, mutual amity and respect and mutual assistance among the National races" and in Chapter V, Article 219 that, “the Union Government preserves stability of the Union, community peace and tranquility and prevalence of law and order.” 6. Moreover, it is stated in Chapter VIII, Article 347 of the Constitution that the Union shall guarantee any person to enjoy equal rights before the law and shall equally provide legal protection” and in Article 353 that,” Nothing shall, except in accord with existing laws, be detrimental to the life and personal freedom of any person.” 7. Chapter I, Article2(c) of Law for Protection of Personal Safety of Citizens defines “personal freedom” as “the right to act, live and speak freely in accord with the law”, and it is stated in Chapter II, Article3of the law that “All citizens are fully entitled to rights for personal freedom and personal safety as stated in the Constitution”, as well as in Chapter III, Article 5(a) that "Ministry of Home Affairs; and relevant government department, government organization, and individuals who are responsible for administrative duties shall provide protection so that, except in accord with existing laws, personal freedom and personal safety is not lost. It is also stated in Chapter III Article6that, “Relevant Ministry and responsible persons shall act in accord with the law if they receivealegal complaint." 8. According to Chapter IX, Section 166 of Myanmar Penal Code, whoever commits an unlawful act if they “…,beingapublic servant, knowingly disobeys any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause, or knowing it to be likely that he will, by such disobedience, cause injury to any person.” 9. As stated in Chapter I, Article2of the Constitution, the Republic of the Union of Myanmar is “where multi-National races collectively reside” and , as stated in Chapter 8, Article 354 (d), where every citizen is at liberty to exercise the rights “to develop their language, literature, culture they cherish, religion they profess, and customs without prejudice to the relations between one national race and another or among national races and to other faiths.” U Vicitta Bhivimsa have written words which effectively encourage terrorism and which, in an act of terror, threaten to deter from amending/ dissolving the Constitution the citizens of Burma who wish to dissolve the Constitution or amend/ dissolve Article 109, Article 141, Article 161, Article 435 of the Constitution. These writings not only create fear in the minds of citizens, but also haveanegative impact on the stability of the Union, and prevalence of law and order, as well as deter the active participation of citizens in amendment/ dissolving of the Constitution, upset peaceful coexistence and threaten the peace process. 10. It is respectively stated in Chapter III, Article 12 (a) and Article 12 (f) of the Attorney-General of the Union Law that “performing the duties of member of the Union Government“ and “prosecuting criminal cases at the Court in accord with law” are among of the duties of the Attorney-General of the Union and in Chapter IV, Article 26 (a) and Article 26 (c) of the law that “prosecuting criminal cases at the Court in accord with law” and “performing the duties ofamember of the relevant Region or State Government” are among the duties of the Advocate-General of the Region or State. 11. Moreover, it is stated in Chapter V, Article5(c) of State Counsellor Law that, “The State Counsellor can act in cooperation with the government, government departments, organizations, associations and individuals to achieve the objectives of the Union”, such as “…flourishing ofamultiparty democratic system, …establishment ofaFederal Union, and peace and development of the Union”. 12. Therefore, as Vicitta Bhivimsa’s writings not only fit the criteria of criminal intimidation according to Section 503 of Myanmar Penal Code and criteria of terrorism defined in Counter-terrorism Law but also haveanegative impact on the accomplishment of the objectives of the Union, namely, flourishing ofamulti-party democratic system, establishment ofaFederal Union, and peace and development of the Union, I am filingacomplaint so effective legal action on U Vicitta Bhivimsa can be taken in cooperation with Union Attorney General, State Sangha Mahanayaka, Chief Minister of Mandalay Region and Attorney General of Mandalay Region. Sincerely, On behalf of those who desire peace and tranquility of citizens, and prevalence of law and order, The undersigned Copies will be delivered to: 1. The President, Republic of the Union of Myanmar 2. Attorney-General of the Union, Republic of the Union of Myanmar 3. Union Minister for Religious Affairs and Culture, Republic of the Union of Myanmar 4. Chief Minister, Mandalay Region 5. Vice-Chairman, State Sangha Maha Nayaka Committee 6. Attorney-General (Mandalay Region) 7. Director-General, Department of Religious Affairs and Culture 8. Religious Affairs Officer, Mandalay Region 9. Chairman, Mandalay Region Sangha Nayaka Committee 10. Chairman, Township Sangha Nayaka Committee, Maha Aungmye Township .................................................................................................. ပြည်တွင်းနှင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ နိုင်ငံအသီးသီးမှ မြန်မာပြည်ဖွားတိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများ မိမိတို့ရပ်ရွာ၊ မြို့နယ်၊ မိသားစုအစုအဝေး အတွင်းမှာ လက်မှတ်များစီစဉ်ကောက်ယူလိုပါက အောက်ပါလိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ ဖိတ်မန္တကပြုပါတယ်။ If you wish to help us collect signatures in Myanmar and abroad, we invite to reach out to us as below: ဆက်သွယ်ရန် - Htuu Lou Rae (Philippines Coordinator) ဖုန်း/ Viber: +639290849011 Email: hrae@master.upeace.org Skype: htuulourae .................................................................................................. Petition လက်မှတ်ရေးထိုးပုံအဆင့်ဆင့် လက်မှတ် ထိုးသူရဲ့ အမည်အရင်းအပြင် မှတ်ပုံတင် ဓာတ်ပုံ၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် နံပါတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံ မပါရင် အစိုးရရုံးများက လက်မှတ်များကို လက်မခံတတ်တာကြောင့် ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်- (၁) လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာ ညာဘက်ချမ်းတွင် First Name နှင့် Last Name နေရာမှာ အမည်ဖြည့်ပါ။ (၂) Email နေရာမှာ email လိပ်စာဖြည့်ပါ။ (၃) မိမိလက်ရှိနေထုိုင်နေသော နိုင်ငံကို ရွေးပါ။ (၄) Your City နေရာမှာ နေရပ်လိပ်စာ ဖြည့်ပါ။ (၅) "I'm signing because... (optional)" နေရာမှာ မိမိလက်မှတ်ရေးထိုးရသော အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ပြလိုပါက ဖော်ပြပါ။ မဖော်ပြလိုပါက ကွက်လပ်ချန်ထားနိုင်ပါတယ်။ (၆) နာမည်အပါအ၀င် အချက်အလက်တွေကို private (လျှိူ့ ဝှက်ထား) ချင်လျှင် Sign ဆိုတဲ့ အနီရောင် ခလုပ်ကလေးကို မနှိပ်ခင် သူ့အောက်က Display my name and comment on this petition ဆိုတဲ့ box လေးကို အမှန်မခြစ်ပဲ ထားလိုက်ရုံ (uncheck လုပ်ရုံ) ပါပဲ။ လက်မှတ်ထိုးသူအပေါင်း ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကြပါစေ။
Petition to Hillary Clinton, Michael Posner, Derek Mitchell, Kurt Campbell
We demand the unconditional release of all political prisoners, the end to military attacks on ethnic groups in Burma, and changes to the flawed 2008 constitution that will permitatrue democracy to develop in the country. On December 1, U.S. Secretary of State Hillary Clinton will be the first American Secretary of State to visit the Southeast Asian nation of Burma in 50 years. Her visit isaway for the United States to assess the sincerity of the Burmese military regime’s commitment to human rights and democracy -- including democratic elections and the release of Nobel Peace Laureate and pro-democracy activist Aung San Suu Kyi. The November 2010 elections were highly flawed, and many parties (including Aung San Suu Kyi's National League for Democracy) boycotted them altogether knowing that their real goal was to install retired military officials and the generals' cronies. Additionally, though Burma's most famous political prisoner, Aung San Suu Kyi, is now free, over 1,600 political prisoners still remain in Burma, including Buddhist monk U Gambira --aleader of the 2007 Saffron Revolution led by Burma's monastic community. While Burma's government prepares to welcome Secretary Clinton, it is still attacking ethnic minorities throughout Burma, using rape asaweapon of war, forced labor, torture and extrajudicial killing. Over 3,700 villages have been destroyed and over 600,000 people are internally displaced or on the run from the Burmese army. On the occasion of her historic visit to Burma on December 1, Secretary Clinton must push publicly for the unconditional release of all of Burma's political prisoners, including the venerable U Gambira, and she must insist on an end to hostilities in Burma, and insist on changes to the 2008 flawed constitution.
U Pyinya Zawta & Nickie Sekera